Kugonesa Yako Email Mifananidzo yeRetina Inotaridza | Martech Zone
Chitatu, July 23, 2014 Douglas Karr
Sekuratidzwa kwepamusoro-soro kunova kwakajairika-nzvimbo pazvinhu zvese zvigadzirwa, zvakakosha kuti vashambadziri vatore mukana wekukanganisa uko kunofanirwa kupihwa nesarudzo yepamusoro. Kujeka kwemifananidzo inoshandiswa mumaemail, semuenzaniso, kunogona kukanganisa zvakanyanya muverengi weemail. Kugadzira ako magiraidhi zvakanaka wozoaita sizing / kuyera iwo - zvese uku uchigadzirisa saizi refaira remifananidzo - chiyero chisina kusimba kuti uve nechokwadi chekuti wakagadzirirwa mhinduro yakanaka uye nekukanda-kuburikidza nemitengo mumaemail ako.
Iyi infographic kubva kuemail Monks, Retina Email - Kugadziridza Chiitiko cheMushandisi neKukwirira Kwemhando Ratidza, inokushandira matipi anokurumidza ekuti ungagadzira sei retina maemail ane hushamwari, uchirangarira mupfungwa chiyero chakakwana chemufananidzo, saizi refaira, mifananidzo yemidhiya yekuteerera email dhizaini uye zvimwe zvakakosha zvinhu.
Tags: mhepoemail dhizainiemail infographicemail mamongikuratidzwa kwemhando yepamusoroiPadipad miniiPhonemacbook 3retina kuratidzaretina emailkugadziriswa kwetina
Pagemodo Zvinyorwa: Wedzera Engagement neYako Yemagariro Vateereri